သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ? အချစ်၊ အခက်အခဲနှင့်အရေးပေါ်ကိစ္စများ
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသို့ဆုတောင်းခြင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ခက်ခဲပြီးအရေးတကြီးကိစ္စရပ်များနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ကက်သလစ်သည်ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့ကိုပါတောင်းဆိုခြင်းသည်အင်အားအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါဌ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားအရာခပ်သိမ်း၏အဖဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းပြသည်။ ထို့နောက်သူသည်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လူသားယေရှုခရစ်အားကျွန်ုပ်တို့အားမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူသည်လူသားတို့၏အကျိုးအတွက်မိမိအသက်ကိုစွန့်ခဲ့သည်။ သူသည်ကောင်းကင်သို့သွားသောအခါဝိညာဉ်တော်ကိုစွန့်ခဲ့သည်။ စန်တိုနှင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သုံး ဦး စလုံးအားရေတွက်နိုင်သည်။
ခမည်းတော်နှင့်သားတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့မီးကဲ့သို့ရွေ့လျားသည်။
ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာစီးရီးများရှိသည် ပဌနာ အရာအတူတကွတ ဦး တည်းနေသောဘုရားသခငျ့သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်ကြ၏အထူးသဖြင့်ညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။
အစအ ဦး ၌၊ ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၊
ထို့နောက်theဝံဂေလိတရား၌ ဓမ္မသစ်ကျမ်း ယေရှုခရစ်တော်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်အားနှင့်ကျေးဇူးတော်ဖြင့်အပျိုကညာမှမွေးဖွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
အဲဒီမှာကယ်တင်ရှင်ရဲ့ဘ ၀ တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သိရှိလာတယ်။ သူသေပြီးရင်ထပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုတက်သွားတဲ့အခါသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကတိတော်ကနေကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာသွားကြပေမယ့်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့မတိုင်ခင်အထိတမန်တော်ဝတ္ထုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တမန်တော်များနှင့်ယနေ့တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်နှင့်သခင်အတွက်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမြှင့်ပါ၏။ မြတ်သောအပျိုစင်၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသောဇနီး၏မြတ်နိုးသောမင်္ဂလာရှိသောမယားဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ထိုစုံလင်ပြီးမြင့်မြတ်သောဘုရားအတွက်၊ သငျသညျကောငျးကငျအားအရှိဆုံးဘုန်းအသရေယူဆချက်၏လုပ်ရပ်၌သူ၏အသန့်ရှင်းဆုံးနှင့်စင်ကြယ်သောနှလုံးလောင်ကျွမ်းနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ; သင်၏အပြစ်ကင်းစင်သောဇနီး၏နာမဖြင့်နှိမ့်ချစွာဖြင့်တောင်းပန်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အပြစ်ပြုမိနိုင်ခြင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကတည်းကကျွန်ုပ်ကျူးလွန်မိသောကြီးလေးသောအပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ငါ၏အမျက်တော်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအမျက်ထွက်စေမည့်အစား၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောတန်ရာတန်ကြေးများနှင့်သင်၏အချစ်ဆုံးဇနီး၏အလွန်ထိရောက်သောကာကွယ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့် N. တို့၏ကျေးဇူးတော်နှင့်မြင့်မြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၏အဖိုးတန်ဆုံးလက်ဆောင်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ရန်တောင်းပန်ပါ၏။ ထိုမီးလုံးများနှင့်ကျွန်ုပ်အားသင်၏ထာဝရ Providence ကငါ့ကိုကယ်တင်ရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အထူးအကူအညီကိုပေးခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်
ဆုတောင်းခြင်းသည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ဆုတောင်းခြင်း၌အလေ့အကျင့်ရရန်၊ မှန်ကန်စွာဆုတောင်းရန်သင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌အာမင်။
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစနှင့်အဆုံး၊ ကျွန်ုပ်၏အစွမ်းသတ္တိ၊ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီနှင့်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားထဲတွင်နေထိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင့်အကူအညီများ။
ဘုန်းအသရေ၊ ဂုဏ်အသရေနှင့်ထိုက်တန်သောသန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ သင်၏တန်ခိုးတော်၊ ခမည်းတော်၊ ဘုရားသခင်၊ သားတော်၊
မင်းရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမျက်စိကန်းစွာယုံကြည်ပြီးမင်းကိုငါမျှော်လင့်တယ်။ မင်းရဲ့လက်ထဲမှာငါထားခဲ့တဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကငါ့ကိုယုံကြည်မှုတိုးပွားစေဖို့ကူညီပေးတယ်။ မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့နေ့တိုင်းပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးအားပေးမှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေပြည့်နှက်လာပါတယ်။
ဘုရားသခင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အသက်တာသည်သင်တို့၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူ။ သင်တို့၏အသက်တာဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနုတ်။ အပြစ်မှကယ်တင်ရန်အရင်းခံသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်တည်မှု၌တည်ရှိနေသောအရာအားလုံးကိုပေးပြီးချီးမြှင့်သည်။ အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အမှားများနှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်ကျူးလွန်မိသောအပြစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုသင့်ထံမှခွဲထုတ်ခြင်းများအတွက်ခွင့်လွှတ်ရန်သင့်အားတောင်းပန်ပါ၏။
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုသနား။ သင်၏အကူအညီကိုပေးပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။ သို့မှသာကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပြည့်နေပြီးစိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊
နှစ်သိမ့်မှု၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သောသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများပြားစွာဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေရန်ဆုတောင်းပါ၏။
ထို့ကြောင့်သင်၏လက်ကိုဆန့ ်၍ ဘုရားသခင်ထံချက်ချင်းအကူအညီရရန်ခမည်းတော်ထံတောင်းလျှောက်ပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။
သန့်ရှင်းသောကောင်းကင်ဝိညာဉ်တော်၊ ကျွန်ုပ်၏ခွန်အားကိုအသစ် ပြန်၍ ကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ရသောဤစစ်ပွဲကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးသင်၏ဆုတောင်းချက်များကိုနားညောင်းပေးပါ။
သင်၏သစ္စာရှိနောက်လိုက်များ၏နှလုံးသားကိုလင်းစေသောဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှအလင်းရောင်ပေးပါ။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ တန်ခိုးတော်နှင့်ကရုဏာတော်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အားဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးမှကင်းဝေးစေပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေသော ၀ မ်းနည်းမှုများကိုသက်သာစေနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ိညာဉ်အားလုံးယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးအနာများကိုပျောက်ကင်းစေပြီးကျွန်ုပ်အပေါ်၌သင်၏သနားခြင်းကရုဏာကိုသွန်းလောင်းပါ။ အရေးတကြီး:
(သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုသင်အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းပြောပါ။ သူတို့၏ဘုန်းကျက်သရေရှိသောအကူအညီကိုတောင်းခံပါ။ )
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များကိုနားထောင်သောကြောင့်၊ ကျေးဇူးတင်ပါ၏ infinitoသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်ကိုလုံခြုံစေပြီးနှစ်သိမ့်မှုပေးသောလုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အရေးကြီးသည့်အရာမှာစိတ်နှလုံးထဲမှမေးမြန်းရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်.
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစနှင့်အဆုံး၊ ကျွန်ုပ်ရှေ့တော်၌ ဦး ညွှတ်ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသည်ထာဝရဂုဏ်အသရေ၊ ဂုဏ်အသရေ၊ ဂုဏ်အသရေရှိပါစေသော။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့်ယုံကြည်ပါ၏။ သစ္စာစောင့်သိသူဖြစ်လိုပါကကျွန်ုပ်ထံအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်မှုနှင့်လာပါ။ အခက်အခဲများနှင့်အန္တရာယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်အားသင်၏မျက်နှာသာပေးပါ။
ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖ၊ သခင်ယေရှုကောင်းသောသိုးထိန်း၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူရန်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော် ၀ င်ခြင်း၊
ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ထာဝရဉာဏ်ပညာ၏ရင်းမြစ်၊ ခမည်းတော်သည်ဘုရားသခင်အားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေပါ။ အသက်သည်သင်တို့ဆီမှလာသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင့်ထံမှလာသည်၊ အချိန်တိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်နှစ်သိမ့်မှုများကိုပျော်မွေ့ရန်အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကလေးဖြစ်ကြောင်းသတိရပြီးကျွန်ုပ်၏ဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ လိုအပ်ချက်များကိုသနားပြီးဤခက်ခဲသောအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်သန့်ရှင်းသောနှလုံးသား၌ခိုလှုံရာ၊ သင့်ဘ ၀ နှင့်သင်၏သီလကိုသစ္စာရှိစွာတုပရန်သင်ပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်၏သွန်သင်ခြင်းကိုပြည့်စုံစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမကြာခဏကျင့်သုံးရန်ကျွန်ုပ်ကိုမြဲမြံခိုင်ခံ့မြဲမြံစေတော်မူပါ။ နေ့စဉ်ရုန်းကန်မှုများ၊ ငါ့ကိုရန်သူထားရှိထားသောဆက်ဆံမှုများမှလွတ်မြောက်စေပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုဝေးကွာစေပြီးကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောဒုက္ခများမှကာကွယ်ပေးပါ။ (ဤမျှော်လင့်ချက်ကိုကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲ)
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းကိုနားလည်စေတဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ သဟဇာတဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ပါ။ ငါအခုလိုအပ်တာအများကြီးရအောင်။
သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူနှင့်အလွန်နီးကပ်သောကျွန်ုပ်၏မိခင်နှင့်မိဖုရားဘုရင်၊ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိပြproblemsနာများနှင့်အားနည်းချက်များအတွက်ဆုတောင်းပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေတစ်ဝက်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းခြင်းကိုတက်ရောက်ပါကကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအံ့ဖွယ်အမှုကိုရယူပါ။ ငါ့ဘဝ
ဘုရား၊ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအဖ၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ငါ့ကိုကရုဏာတော်ပြပါစေ။ ငါ့ကိုသနားကြင်နာပါ။
အဖ၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၊ မြတ်နိုးဖွယ်နှင့်အသန့်ရှင်းဆုံးသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ၏။
အိုဘုရားသခင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ ကိုယ်တော်၏မြင့်မြတ်သောအလိုတော်ကိုကျွန်ုပ်စွန့်လွှတ်သည်။ သင်၏အချိန်သည်ပြီးပြည့်စုံပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်သာလျှင်အဘယ်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ခမည်းတော်ကိုဘုန်းထင်ရှားစေ၊ သားတော်ကိုဘုန်းထင်ရှားစေ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဘုန်းတော်၊ ထရီနီဒတ်, အစအ ဦး ၌ရှိသကဲ့သို့, ယခုနှင့်အစဉ်အမြဲ, အစဉ်အမြဲ။
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ ကလေးတစ် ဦး သည်ဘုရားသခင့်အကူအညီလိုအပ်။ ၎င်းကိုမသိရသော (သို့) မတောင်းဆိုလိုသောကိစ္စများ၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးကြီးသောလက်တော်သည်စွမ်းအားဖြင့်ရွေ့လျားသွားသည်။
ထာဝရသန့်ရှင်းသောအပျိုစင်၊ ကောင်းကင်ဘုရင်မ၊ စကြာ ၀ ofာ၏နာယကနှင့်နာယက၊ ထာဝရဖခင်၏သမီး၊ ချစ်မြတ်နိုးရသောသားတော်၏မိခင်နှင့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူး၊ သင်၏မြင့်မြတ်သောဘုရင်၏ခြေရင်း၌ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကို၎င်း၊ သငျသညျကောငျးကငျသို့သင်တို့၏ယူဆချက်၌ငါ့ကိုအလွန်သင်၏အလုံခြုံဆုံးနှင့်သစ္စာအရှိဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာထားရှိခြင်း, ငါ့ကိုသင်တစ် ဦး တည်းသောကျေးဇူးတော်နှင့်သနားခြင်းကရုဏာတော်ပေးသနားခြင်း, သင်၏အပျိုကညာပေါ်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်သယ်ဆောင်သောသူတို့အားအပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့်ကံကောင်းကျွန်၏နံပါတ်၌ငါ့ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း။
ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဆင်းရဲဖွယ်နှလုံး၊ မှတ်ဉာဏ်၊ အလိုတော်နှင့်အခြားအတွင်း၊ အပြင်အင်အားနှင့်ခံစားမှုများကိုလက်ခံရန်မိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်တင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏မျက်စိ၊ နား၊ ပါးစပ်၊ လက်နှင့်ခြေတို့ကိုလက်ခံပါ၊ သင်၏သားတော်၏မျက်နှာသာအရအုပ်စိုးပါ။
သင်၏ချစ်မြတ်နိုးဆုံးသားတော်ကသင့်အားဉာဏ်အလင်းပေးသောထိုဉာဏ်ပညာအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာသိရန်၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ ကျွန်ုပ်၏အချည်းနှီးဖြစ်သောအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်ထံတောင်းလျှောက်တောင်းပန်ပါ၏။ အဆိုပါ infernal ရန်သူနှင့်၎င်း၏ဝှက်ထားသောနှင့်ထင်ရှားသောတိုက်ခိုက်မှုများ၏။
ဒါ ဆုတောင်းခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သာယာဝပြောမှုအတွက်တောင်းခံရန် Ala Santísima Trinidad သည်အလွန်ပြင်းထန်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ပါတယ် y လမ်းပြပါ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုသာဆောင်ရွက်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်စေကာကွယ်မှုတောင်းခံနိုင်သည်။
ထိုအပြုသဘောစွမ်းအင်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုပျံ့နှံ့သွားသည်ကိုသတိရပါ။
ဘုရားသခင့်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ရန်မတတ်နိုင်သောအရာမရှိ။ ဘုရားသခင်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်သို့မဟုတ်တန်ခိုးကြီးသောအရာမရှိ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂရုစိုက်တော်မူသည်၊